हजाराैं दर्शककाेवीचमा खेल्ने अनुभव लिनका लागि नेपाल अाएँः केभिन ओब्राइन | Neplays.com
खेलाडीले सफलताबाट जति सिक्छ, त्यो भन्दा बढी असफलताबाट सिक्दछ ।
नेप्लेज । एभरेष्ट प्रिमियर लिगको नयाँ संस्करण शनिबारदेखि शुरु हुँदैछ । काठमाडौं किंग्स्मा अनुबन्धित आयरल्याण्डका स्टार ब्याट्सम्यान केभिन ओ ब्राइन आज नेपाल आएका छन् । नेपाल अवतरण भएपछि नेप्लेजले ओ ब्राइनसँग नेपाल आउनुको कारण, नेपाली क्रिकेटलाई हेर्ने उनको नजर र टेस्ट मान्यता पाएपछि क्रिकेट आयरल्याण्डमा भएको परिवर्तनमा आधारित रहेर छोटो कुराकानी गरेको थियो ।
काठमाडौं अवतरण गर्दा कस्तो अनुभव भयो ?
सर्वप्रथम मलाई यहाँ बोलाउनु भएकोमा काठमाडौं किंग्स्लाई धन्यवाद । यहाँ आउँदा खुसी अनि उत्साहित छु । प्रतियोगिताको यो संस्करण अघिल्लो संस्करणको तुलनामा अझ उत्कृष्ट रहन्छ भन्ने विश्वास छ ।
तपाईंले काठमाडौं किंग्स्लाई नै किन छान्नुभयो ?
काठमाडौं देशको राजधानी हो, सम्भवतः यो प्रतियोगिताको सबैभन्दा ठूलो फ्रेन्चाइजी टोली पनि हो । मैले इंग्ल्याण्ड र केही अन्य स्थानका ठूला टिममा रहेर खेलेको छु, तर देशको राजधानीको टिममा खेल्न पाउनु मेरो लागि नयाँ अनुभव हुनेछ । काठमाडौं किंग्स्लाई धन्यवाद ।
नेपालले एकदिवशीय मान्यता पाएपछि आयरल्याण्ड नेपालमा खेल्न चाहन्छ भन्ने ट्वीट आएको थियो । के तपाई यहाँको मैदान र पिचको निरीक्षण गर्न आउनु भएको हो ?
त्यस्तो होइन । नेपालले एक दिवशीय मान्यता पाएपछि मैले ट्वीट गरेको थिएँ । वास्तवमा केही वर्षअघि अमेरिकासँगको त्यो खेल, जहाँ ४० हजारभन्दा बढी दर्शकको उपस्थिती रहेको थियो । एउटा खेलाडीका रुपमा म दर्शकको बाक्लो उपस्थितीमा खेल्ने अनुभव लिन चाहन्छु । दर्शकले दिने दबाबकावीच खेल्न मन पर्छ । म यहाँ आउनुको मुख्य कारण दर्शक हो ।
यो प्रतियोगिता सहभागी टिमले ल्याएका विदेशी खेलाडीहरु उत्कृष्ट छन् । त्यसैले यस्तो माहोलमा खेल्न पाउँदा निकै उत्साहित छु । मैले यसअघि यहाँ कहिल्यै खेलेको छैन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा मैदानमा आउने दर्शकको जमात, नयाँ वातावरण र नयाँ पिचका कारणले नै मैले यहाँ आउने निर्णय गरेको हुँ ।
आयरल्याण्डले हालैमात्र टेस्टको मान्यता पाएको छ । टेस्ट मान्यता पाएपछि तपाईंको देशको क्रिकेट स्तरमा कस्तो परिवर्तन भएको छ ?
सन् २००७ को विश्वकपमा पाकिस्तानलाई हराएपछि क्रिकेट आयरल्याण्डको क्षमता विश्वसामू प्रमाणित भएको थियो । त्यो बेलादेखि आयरल्याण्ड क्रिकेटमा आशा पलाएको थियो । क्रमशः दर्शक र समर्थकको उपस्थिती बाक्लिँदै गयो । अहिले आयरल्याण्डमा बालबालिकाहरु पनि क्रिकेटप्रति आकर्षित हुन थालेका छन् । तर रग्वी, फुटबल, गेलिक फुटबल र राष्ट्रिय हर्लिङ गेम्स जस्ता ‘ठूला’ खेलसँग प्रतिष्पर्धा गर्नु आयरल्याण्ड क्रिकेटको ठूलो चुनौति हो ।
तर हामीले टेस्टको मान्यता पाएपछि क्रिकेटमा एक पाइला अघि बढेका छौं । हामी मिडियामा पनि छाउँदै आएका छौं । स्टेट लेभलको र ब्यावसायिक क्रिकेट हेर्ने दर्शकको उपस्थिती पनि बढ्दो अवस्थामा पुगेको छ, आशा छ यो क्रम बढ्दै जानेछ ।
नेपालको राष्ट्रिय टिमसँग यसअघि पनि खेलिसक्नु भएको छ । नेपाली खेलाडीको प्रदर्शन कस्तो लाग्छ ?
अन्तिम पटक नेपालसँग हामीले २०१५ मा खेलेका थियौं । साँढे तीन वर्षको अन्तरालमा टिममा पक्कै पनि ब्यापक परिवर्तन भयो होला । केही खेलाडीहरु अझै पनि खेलिरहेका छन् । त्यो खेलमा नेपाली टिमले राम्रो प्रदर्शन गरेको थियो । नेपाली खेलाडीमा क्षमता भएकै कारणले हो, एकदिवशीय मान्यता पनि पाउन सफल भयो । महत्वपूर्ण कुरा भनेको म्याच एक्सपोजर हो । यस्ता प्रतियोगिता जति धेरै आयोजना भयो, खेलाडीले जति मेहनत ग¥यो, त्यति नै नेपाल क्रिकेटलाई फाइदा हुन्छ ।
खेलाडीले सफलताबाट जति सिक्छ, त्यो भन्दा बढी असफलताबाट सिक्दछ । असफल भयो भने झन् छिटो सिक्छ जस्तो लाग्छ ।
अन्तिममा, के काठमाडौं किंग्स्ले यो प्रतियोगिता जित्छ ?
आशा गरौं … । पाँच–६ वटा टिम छन्, जसमा उत्कृष्ट खेलाडी छन् । सबै टिममा उत्कृष्ट विदेशी खेलाडीको उपस्थिती छ । हाम्रो टिमका नेपाली र विदेशी खेलाडीको समिश्रणले राम्रो नतिजा आउँछ भन्ने विश्वास छ ।
समग्रमा यो प्रतियोगिता रोमाञ्चक र प्रतिष्पर्धात्मक हुनेछ । जुन टिमले शान्त ढंगले आफ्नो रणनीति बनाएर खेल्छ, उसले नै यो प्रतियोगिता जित्छ । आशा गरौं, हामी नै सफल हुनेछौं ।